​Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo neMugovera muguta reKaroi pamwe nekuHurungwe mudunhu reMashonaland West, zvisineyi nekuti mapurisa akavanyima mvumo yekuenderera mberi nemisangano iyi.
VaChamisa vanoti ivo sebato vakaita zvose zvinotarisirwa kuitwa pamutemo zvekuzivisa mapurisa paine nguva, saka havaoni chinovatadzisa kuenderera mberi nemisangano yavo.
Bato iri rakanyorera mapurisa musi wa 31 Gumiguru richivazivisa nezvehurongwa hwekusangana nevatsigiri varo uhwu, asi musi wa 7 Mbudzi mapurisa akazopindura tsamba iyi achiti MDC yakanga isingakwanisi kuenderera mberi nemisangano iyi.
Mapurisa anoti pasi pechikamu 26(10) chemutemo wePOSA, bato iri harikwanise kuita musangano nekuti nhengo dzaro dzakakundikana kuenda kumapurisa kuti vakurukure nezvezvinyunyuto zvinonzi zvakasimudzwa nevemabhizimusi pamwe nevamwe vagari vemuKaroi.
Pamusoro pezvo, mapurisa anoti haakwanisi kuchengetedza musangano uyu sezvo vari kushanda munzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kwavari kuchengetedza.
VaChamisa vanoti misangano yavo iyi yakanangana nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira sarudzo dziri kuuya gore rinouya.